Cuntooyinka Cidhibta Ku Sugan 2017 Horudhac Makhaayad Qaybta 1 - Cuntooyinka Lugaha
Cunnooyinka ciribta 2017 Horudhaca Makhaayada Qaybta 1
Cunnooyinka Cidhibtooda 2017 ayaa in ka yar bil uun ka hadhay! Kaliya maahan dhacdadan inay tahay qarax lala damacsan yahay, laakiin 100% oo ah lacagaha ka soo baxa si loo taageero Cuntada Lugaha. Mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhacdada sanad walba waa cuntada dhadhanka badan ee ay bixiyaan maqaayadaha maxalliga ah. Hoos waxaa ku yaal tusaale ka mid ah makhaayadaha qaarkood oo aad ka heli doonto fursad aad ku tijaabiso-tijaabinta Cunnooyinka Cidhibta sannadkan
The New American Restaurant, Xavi, ayaa markiisii ugu horreysay ka soo muuqan doonta Meals on Heels sanadkan, mana noqon karno mid aad u faraxsan. Xavi wuxuu u adeegaa taarikada yar-yar iyo sidoo kale waxyaabo hilib leh, oo si fiican ugu lammaan xulashada biirka iyo khamriga. Barxadooda bannaanka u fiican waa meesha ugu habboon ee lagu hoydo habeen xagaa fiican.
Cuntada Bariga ee Eli iyo Is biirsaday
Cuntada Bariga ee Eli iyo Cocktails sidoo kale waxay waji cusub ku noqon doontaa Meals on Heels sannadkan, oo ay ku jiraan waxyaabo badan oo maxalli ah iyo walxaha guriga lagu sameeyo, waxaan hubnaa in martidu aysan niyad jabi doonin. Haddii aadan sugi karin illaa Cunnada Cidhibtooda oo aad rabto inaad iska hubiso, ka faa'iideyso qaar ka mid ah astaamahooda sida cunnooyinka habeenka dambe (jikada waxay furan tahay ilaa 1-da subaxnimo), iyo sidoo kale sabtida iyo axadda
Makhaayadaha Cuntada ee Faransiiska & Kafeega
The French Meadow Bakery & Cafe wuxuu ahaa rootigii ugu horreeyay ee shahaado laga helo ee Mareykanka. Waxay u adeegaan gluten-la'aan, vegan, khudradda, maxalliga ah, cuntooyinka dabiiciga ah iyo kuwa dabiiciga ah. Waxay sidoo kale yihiin Cunno ku soo noqoshada hudheelka Heels waxaanan aad u sugeynaa waxa macaan iyo cunnooyinka gaarka ah ee ay u keeni doonaan Cunnooyinka Heellada sanadkan!
Waxna ma jiraan Bakeega
Waxaan ku qanacsanahay in macmacaanka Waxyaabaha 'Bundt Cakes' aysan ku soo laaban doonin Cunnooyinka Heels sannadkan! Keegaggan afka-waraabinaya dhammaantood waxaa lagu sameeyaa maaddooyin dhab ah oo cusub. Iyagaa si fudud loo heli karaa, markaa haddii aadan sugi karin illaa bisha Ogoosto si aad u hesho taada, waxaad u istaagi kartaa mid ka mid ah lixda meelood oo ay ku leeyihiin Metro si aad mid uga soo qaadato.
Golaha Ciyaaraha ee Rival House
The Rival House Sporting Parlor ee kuyaala bartamaha magaalada St. Paul waxay bixisaa makhaayado warshadeed oo guryo ah iyo qol is biirsaday. Intaas waxaa sii dheer, qolkooda Sporting wuxuu marti geliyaa ciyaaro kala duwan sida kubbadda skee, ping pong, iyo xeegada xumbada. Pizzas-ka ay alwaaxda ku shidan yihiin waxay ku lammaan yihiin astaamaha xirfadeed ee biirku saaraan iyo ruuxi qiimo sare leh Waxay ku cusub yihiin Cunnooyinka Cidhibtooda sannadkan, waana ku faraxsanahay inaan qayb ka noqonno dhacdadeenna!
Abaal-marinta ku guuleystay St. Paul Grill labaduba waa St. Paul iyo Meals on Heels classic, laakiin sannad kasta waxay nagala yaabaan cunno cusub oo soo jiidasho leh oo aan isku dayno. Liiskooda kaladuwan waxay soo bandhigaan noocyo kala duwan oo ah cuntooyinka caadiga ah ee Mareykanka oo ay weheliyaan xulashooyin ballaaran oo isboorti dhif ah, wiifto iyo cognacs. Ma sugi karno inaan aragno waxa ay isku qarxinayaan sanadkan!
Haddii aadan rabin inaad seegto cunnadan afka-waraabineysa, iyo dhammaan meelaha kale ee soo jiidashada leh ee Cunnooyinka Heels waa inay bixiyaan, hubso inaad iibsato tigidhkaaga halkan! Kuwa idinka mid ah ee horey u helay tikidhadaada, u soco sidayada Bogga Facebook! Waa habka ugu wanaagsan ee lagula socon karo hadiyado bixinta, ogeysiisyo badan oo makhaayadaha ah, iyo dhammaan cuntooyinka kale ee ku saabsan wararka Heels.
Halkan ka eeg Qeybta 2 ee Cunnadeena Dul-marinta Makhaayadaha Heels!
Julaay 7, 2017